Gungano renyika dzakawanda rakaitwa paCommerzbank Arena muFrankfurt kuGermany
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Catalan Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fante Finnish Frafra French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hungarian Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maya Mingrelian Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tigrinya Totonac Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Vezo Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Rudo Ndirwo Rwakavabatanidza paGungano rekuFrankfurt kuGermany
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Rudo Ndirwo Rwakavabatanidza paGungano rekuFrankfurt kuGermany
Rimwe pepanhau rinonzi Frankfurter Rundschau, raiva nemusoro unoti, “Mabiko Emhuri.” Vanhu vaivapo vakabvumirana nezvakataurwa nepepanhau iri.
Karla uyo akabva kuPuerto Rico akati, “Ndakagamuchirwa zvakanaka chaizvo!”
Sara wekuAustralia akati, “Ndainzwa sekuti ndakanga ndashanyira hama dzangu dziri kune imwe nyika iri kure chaizvo.”
Chii chakaita kuti vanhu ava vataure kudaro? Imhaka yezvavakaona pagungano renyika dzakawanda reZvapupu zvaJehovha paCommerzbank-Arena, muguta reFrankfurt am Main, kuGermany. Gungano iri rakaitwa kubva musi wa18 kusvika 20 July 2014, uye rakapindwa nevanhu vanenge 37 000.
Vanhu ivavo vakaungana kuti vadzidze Bhaibheri. Purogiramu yacho yaisanganisira kuverengwa kweBhaibheri, nziyo, minyengetero, mitambo miviri, uye kutsanangurwa kwezvinodzidziswa neBhaibheri panyaya dzakasiyana-siyana.
Pavanhu vaivapo paiva neZvapupu zvemo muGermany uye zvimwe zvinopfuura 3 000 zvakabva kuAustralia, Britain, Greece, Lebanon, Serbia, South Africa, nekuUnited States. Paivawo neZvapupu 234 zviri mubasa renguva yakazara, rakadai sereumishinari, zvaibva kunyika 70.
Indaneti yakashandiswa kutepfenyura purogiramu yacho kune dzimwe nzvimbo 19 muGermany, uyewo kuAustria, neSwitzerland zvekuti vanhu vaiva munzvimbo idzi vaigona kuona nekuteerera gungano iri. Vanhu vese vainge vakaungana kuti vateerere purogiramu iyi vaisvika 204 046.
Hazvinei Nekuti Vaitaura Mitauro Yakasiyana
MuFrankfurt, purogiramu iyi yakaitwa muChirungu, chiGerman uye chiGiriki. Kune dzimwe nzvimbo, zvaidzidziswa papurogiramu yacho zvaiturikirwa mumitauro 17 kusanganisira chiArabic, chiChinese, chiTamil, chiTurkish, nemitauro miviri yemasaini.
Rudo ndirwo rwakabatanidza Zvapupu izvi pasinei nekuti vaitaura mitauro yakasiyana uye vachibva kunyika dzakasiyana. (Johani 13:34, 35) Vaiita sevana vemunhu mumwe chete.
Tobias, wekuBritain akati, “Takanyatsozvionera kuti sangano redu harinei nekuti tinobva kupi kana kuti tinotaura mutauro upi.”
Davianna, wekuPuerto Rico akati, “Ndakaona Zvapupu zvinobva kunyika dzinopfuura 20. Kudanana kwatinoita uye kuda kwatinoita Mwari ndiko kunoita kuti tibatane.”
Malcom uyo akabva kuAustralia akati, “Pandakava Chapupu chaJehovha ndaigara mune kamwe kataundi kadiki kari muAustralia. Ndakamboverenga nezvesangano redu uye ndakamboona mavhidhiyo anoratidza kubatana kwarakaita. Asi kuuya kwandaita kuno kwaita kuti ndinyatsozvionera kuti zvechokwadi takabatana uye kwasimbisa kutenda kwangu.”
Vacharamba Vachiyeuka Kugamuchirwa Kwavakaitwa
Ungano 58 dzeZvapupu muFrankfurt nenzvimbo dzakapoteredza dzakagadzira zvipo zvekupa vaenzi ava uye dzakaronga mapurogiramu emanheru ekuvatandadza.
Cynthia wekuUnited States akati, “Takagamuchirwa zvakanaka chaizvo. Handimbofi ndakakanganwa rupo rwaiva neZvapupu zveko uye rudo nemutsa zvavakatiratidza.”
Simon wekuGermany akatiwo, “Vanhu vaivapo vairatidza kuti vane rudo chaizvo uye vaifara. Pane zvakawanda zvatinogona kudzidza kubva kune vamwe.”
Amy wekuAustralia akati, “Zvatakaita panguva yekutandara kwemanheru zvakandiratidza kuti Zvapupu zvaJehovha hazvirarami upenyu hwekuzviomesera. Tinoziva kunonzi kufara kwechokwadi asi tinoziva pekugumira.”
Gungano Ravasingafi Vakakanganwa
Gungano rekuFrankfurt raiva rimwe remagungano enyika dzakawanda akaitwa munyika 9 pasi rose.
Paakabvunzwa nezvegungano rekuFrankfurt, mumwe akapinda gungano iri akati: “Fungidzira wawana hama yako yepedyo, zvichida mukoma wako, wawanga usingazivi. Pamunosangana anobva akutambira nemaoko maviri. Unoita seuchabata denga nemufaro. Chifungidzira wasangana nevanhu vakadaro 37 000. Ndizvo zvazvakanga zvakaita pagungano iri.”
Mwari anoda kuti kuda kwake kuzivikanwe pasi rose. Chaanoda chacho chii, uye ndivanaani mazuva ano vari kudzidzisa vamwe nezvacho?